Banyere Anyị - Zhejiang Yongyuan valvụ Co., Ltd.
Certificate nke ISO9001 management usoro a nwetara na 1993, TS rụpụta ikike (The mba pụrụ iche ngwá n'ihi pipeline na valvụ) na 2002 na API 6D (American Petroleum Institute) ikike na 2009.Our factory nwere a elu àgwà akara usoro na a raara onwe ya nye àgwà akara otu, niile valves na-nyochara on API598 ma ọ bụ API6D, si otú anyị nwere ike na-enye ezigbo àgwà valves ahịa. Anyị ga na-mgbalị n'imeziwanye ngwaahịa mma na ahịa n'ụwa nile.
The ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe nke 36569 square mita, na 30500 square mita nke ogbako na 218 ọrụ. E nwere anọ agadi engineer, abụọ QA agadi engineer, ndị ọzọ 28 injinia na technicians. Anyị nwere zuru edoghi ngwá si mmepụta, nnyocha na ule, dị ka abụọ edoghi nke ájá mgbatị na abụọ e nke ego mgbatị, 208 tent nke n'ibu nhazi akụrụngwa. Test ngwá mejupụtara ihe spectrometer, tensile tester, ekweghị ekwe tester, ultrasonic oghom detector, ọkpụrụkpụ tester, metal film analyzer & anụ ahụ na chemical analysis ụlọ. Anyị mmepụta ike esịmde 6800 Tọn maka dị iche iche di iche iche nke elu, ọkara na ala nsogbu valves, na n'elu 50 na ụdị na-600 iche iche nke nkọwa. Anyị nwere onye-nkwụsị mmepụta ike si nnyocha, imewe, mmepe, ibe ya bụrụ, ájá mgbatị, ego mgbatị, machining, nzukọ, ule, mkpuchi na mbukota.
Dị ka ụkpụrụ nke GB, JB, HB, ANSI na JIS, anyị Nlụpụta bọl valves, ụwa valves, n'ọnụ ụzọ ámá valves, urukurubụba valves, lelee valves, igbapu afia, fluorine agbakọta valves, pneumatic na electric uzuoku akara valves, enyemaka valves na dị iche iche iche iche nke Flange, na iche iche iche iche nke akụrụngwa (alloy ígwè, okpomọkụ-eguzogide ígwè, igwe anaghị agba nchara, carbon ígwè, ductile ígwè na isi awọ ígwè), na-arụ ọrụ nrụgide bụ 1.6-4.8Mpa na okpomọkụ n'okpuru 480C Celsius.
Na mkpara otu nke ọma na nkà na ụzụ na elu àgwà, mma ụlọọrụ omenala, anyị na-raara onwe-enye anyị na ndị ahịa na àgwà ọrụ, ịgbaso echiche nke ACTION, nweta, nkà na ụzụ na mmepe.
Azụmahịa na nkà ihe ọmụma
Iji nweta ụlọ ọrụ adigide mmepe na bikọta na ngalaba-ọma na anyị mmekọ nke mmasị, anyị ụlọ ọrụ, na-ewere mmadu na ùgwù n'ime akaụntụ, emewo ka azụmahịa nkà ihe ọmụma n'okpuru:
1. Human na-eche nanị
Ahụkebe ìgwè ndị anyị kasị dị ịrịba ama akụ. N'ihi ya, anyị na e ji ezi obi na-achọ inwere ndị ọzọ talent isonyere anyị ụlọ ọrụ ebe anyị ga-ike amara
ike ụgwọ ọnwa na uru na a ala na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi maka anyị mkpara ikwado ha na-aghọta ha onwe ha ọrụ na oké ọchịchọ, nke nwere ike na-eme ka ịga nke ọma ha na-enwe fun n'oge ọrụ. Ịbụ akụkụ nke anyị na ị nwere ike ịmepụta na gị onwe gị ọrụ chụpụrụ site ekwe ndi oru.
2. ahịa afọ ojuju
A ukwuu-eguzosi ike n'ihe otu nke ndị ahịa bụ oké egwu maka anyị azụmahịa ihe ịga nke ọma. Anyị ya mere, na nakweere ngụkọta quality-nkwa usoro na-emepụta na ngwaahịa nke kasị mma mma na-egbo ahịa 'mkpa. N'otu oge ahụ, anyị na-etinye mkpesa si ahịa na akpa ebe ilebaanya. Naanị enwe ndị a ahịa nwere ike anyị na-enweta ihe anyị mere. Ọ bụ ha chọrọ na mkpa na-eduzi anyị ka anyị ebe anyị na-aga. Adịru, anyị ga-eme mgbalị nile iji nye ndị ahịa anyị na top àgwà ngwaahịa na nke kacha mma ọrụ dị ka nke ọma dị ka na-akwado. Ọ bụla echiche na aro na-nnọọ na anyị na-inyerịta echiche na ndị ahịa anyị, nke ga-eme ka anyị na-rụọ ọrụ ka anyị ụkpụrụ.
High mgbanwe nke anyị esịtidem nzukọ na mkpochapu hierarchy nwere ike na-eme ka otutu oge ẹkụre oru ngo. Anyị na-agụ na onye ọ bụla ọzọ iru anyị na-akọrọ ihe mgbaru ọsọ na nke ukwu kpọrọ ihe bu, nghọta na iguzosi ike n'ihe n'etiti ụlọ ọrụ, ndị ahịa na ndị ọzọ na-emekọ ihe. N'ime nzukọ, anyị na-enye ihe niile ọrụ ndị dị mkpa nchikota, ngosi arụ ọrụ na ọnọdụ na mkpara nkà ọzụzụ inyere ha aka na-eto eto elu.